WAXBARASHADA IYO SAAMEYNTA AY KU YEELATO DADKA IYO DALKA. - Wardeeq 24 TV WAXBARASHADA IYO SAAMEYNTA AY KU YEELATO DADKA IYO DALKA. Wardeeq 24 TV
Home Waxbarashada WAXBARASHADA IYO SAAMEYNTA AY KU YEELATO DADKA IYO DALKA.
WAXBARASHADA IYO SAAMEYNTA AY KU YEELATO DADKA IYO DALKA.
Waxbarashadu waa nidaam barbaarineed oo u habaysan si ay u hagto bulshada. Waxa ay jihaysaa aayaha waddan iyo dadka ku nool, waana hagaha ummadda oo la’aanteed aanay jiri karin nadaam, hormar iyo kaladambayn toona.
Ma jiro Dhaqaale kobcayaa oo hore u marayaa haddii aan aqoon lagu qorshayn oo lagu maamulayn. Ma jirto bulsho is beddel iyo horumar gaadhaa; haddii aqooni maqantahay. Mana jirto bulsho hab nololeedkeeda sare u qaadi kartaa; haddii aanay aqoonta dadkeeda adeegsan.
Noociyada Wax-barashada ee ummadi u qorshayso dadkeeda, waa in ay noqotaa mid laga rabo in ay ka jawaabto marba baahida iyo mushkiladaha/dhibaatooyinka waddanka haysta. Waa in wax-barashadu ahaataa mid lagu sar gooyey dhaqanka iyo diinta aasaaska u ah bulshada, hab nololeedka, habka wax-soo-saarkeeda iyo bii’adda dalka. Wax-barashada ummadi dadkeeda iyo dalkeeda u qorshaysaa, waa in aanay noqon mid ummad kale u qorshaysay dadkeeda iyo baahida iyo dhibaatada u gaarka ah. Waa in wax-barashada heer kastaba lagu sar gooyaa baahida iyo dhibaatooyinka dalka iyo dadka u gaarka ah.
Previous articleQiimaha Waxbarashada iyo saamaynta ay ku leedahay shakhsiyadda qofka
Next articleQOFKA IYO WAXBARASHADA